बिरामी बन्ने सबै मर्न छैन!
अहिले, 11.373 बिरामी भएको Corona भाइरसले। ती को, 259 मर्नुभयो, तर 252 बरामद गरेको छ!
यांगचोपिंग मा Corona भाइरस
हिजो म स्वीडेन बस coronavirus को आफ्नो पहिलो पुष्टि मामला प्राप्त गरेको छ कि बाहिर फेला, एक 20 वर्ष पुरानो महिलाले मा छुट्टयाएर छ यांगचोपिंग मा Ryhov मा काउन्टी अस्पताल । दुई प्रत्यक्ष भिडियो म Corona भाइरस मा खडा छन्। अन्य कुराहरु, तिनीहरू किन coronavirus हामीलाई तर्साउन?
प्रारम्भिक मा, म यसलाई धेरै intimidating र बढेको थियो लाग्यो। सबै Corona भाइरस बनाउँछ कि मर्दैन। जस्तै ती धेरै केही वर्ष पहिले सुँगुर फ्लू को मृत्यु मृत्यु भएका ती, बहु-बिरामी मान्छे छन्। को coronavirus प्रगतिमा छ कि अब सुरु सामान्य मौसमी इन्फ्लूएंजा , जो सक्छ स्वीडिश मृत्यु सयौं । मानिसहरूलाई र उच्च रूपमा रिपोर्ट छैन भनेर scares भने।
252 बरामद गरेको छ
Jönköping मा 20 वर्षीया महिला, युवा शायद बलियो र मरिरहेका छैन। यसरी त्यो चाँडै ठीक हुनेछ।
अहिले, 11.373 बिरामी भएको Corona भाइरसले । ती को, 259 मृत्यु , तर 252 बरामद गरेको छ !
येशूले विश्वास गर्ने हामी डरा र coronavirus डर भरिएको होस् छैन। हाम्रो सुरक्षा जे हुन्छ येशू छ।
परमेश्वरले विपत्ति तपाईंले सुरक्षित हुनेछ
हिजो मलाई Rune हजुरबुबा भनिन्छ। को coronavirus को कारण गरेर, उहाँले मलाई ठूलो पद दिनुभयो:
भज 91: 5th तपाईं डर छैन छैन दिन झिंगा,6कि तीर रात द्वारा आतंक, छैन विपत्ति छ कि अन्धकार वा noonday मा चर्किरहेको को विपत्ति मा चलाउँछ।
हामी किन येशूको विश्वासी डर छैन? अघिल्लो पदहरूमा, तपाईं जवाफ प्राप्त:
भजनमा 91: सर्वशक्तिमान को छाया अन्तर्गत उच्चतम संरक्षण पालन वास,2उहाँले भन्छन् कि 1 उहाँले: "। प्रभु मेरो शरणस्थान हुनुहुन्छ र मेरो किल्ला, मेरा परमेश्वर, म भरोसा"3उहाँले पर्छ र Fowler पासोमा देखि र विनाशकारी विपत्ति देखि तिमीलाई छुटकारा ।4आफ्नो पंख उहाँले आफ्नो पखेटा अन्तर्गत शरण पाउनुहुनेछ, तपाईं कवर हुनेछ। आफ्नो विश्वसनीयता एक ढाल र buckler छ।
के तपाईं येशू ख्रीष्टको प्राप्त गर्नुभएको छ भने छैन र सुरक्षित भयो म तपाईंलाई त्यसो सुझाव त। तपाईं ठूलो स्वरमा सीधा येशूलाई प्रस्तावित यो प्रार्थना प्रार्थना गरेर येशूको प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ:
"येशू, म तिमी मलाई क्षमा गरेका छौं भनेर अब प्राप्त र तपाईं प्रभुको रूपमा स्वीकार। म परमेश्वरले मरेको तपाईंले उठाएको भन्ने विश्वास गर्छन्। म अब सुरक्षित छु भनेर धन्यवाद। धन्यवाद र म अब परमेश्वरको सन्तान हुँ भनेर धन्यवाद। आमिन। "
Vecka 24, torsdag 17 juni 2021 kl. 22:50